Mkpado: 2035 | Martech Zone
You Ga-atụfu Ọrụ Ahịa Gị na Robot?
Wenezdee, Jenụwarị 24, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị ị na-eji snicker na… wee gaa gbaa bourbon ka ịchefu. Na akpa anya, nke a yiri ka ọ bụ ajụjụ nzuzu. Kedu otu n'ime ụwa ị nwere ike isi dochie onye njikwa ahịa? Nke ahụ ga-achọ ikike iji mụọ omume ndị na-azụ ahịa nke ọma, nyochaa data dị mgbagwoju anya na ọnọdụ dị mma, ma chee echiche iji wepụta ihe ga-arụ ọrụ. Ajuju choro ka anyi tulee oru ndi anyi n’eche